Tsika Nezvedu Sevhisi & Mugadziri | Hengli Metal Kugadziriswa
Hangzhou Hengli Metal Kugadziridza Co, Ltd.
Kubva 2002, nhengo yedu ye660-timu yemainjiniya, maowelders, imba yekuchengetera, vashandisi vezvigadzirwa, nyanzvi dzebasa revatengi, nevamiriri vekutengesa, vese varipo uye vakagadzirira kuteerera kune zvaunoda uye nekupa pane chivimbiso chedu cheakanakisa simbi yekugadzira simbi.
Vashandi vedu vanozobata yako projekiti kubva kune yako yekutanga kutaurirana kuburikidza nekuendesa kwechigadzirwa chakapedzwa.
Hengli yakazara-akashongedzerwa, 55,000 sq m2. chivakwa chinotipa izere neyakagadzirwa yekugadzira uye tsika yekunyepedzera kugona kunodiwa kugadzira zvigadzirwa zvechigadzirwa chako.
Hengli inopa 100% -kuita kweyekuongorora uye inogona kupa yakawedzera yehutano yekuyedza kuyedzwa kana zvichidikanwa.
Pedzisa Kugadzira uye neMasevhisi eSevhisi - Yedu masevhisi anosanganisira CNC plasma yekucheka, murazvo kucheka, laser kucheka, kutendeuka, kukotama, kuveura, kutenderera machining uye kutema. Isu tinogadzira kune yakanyanya kuomarara yekushongedza kushivirira kunokwanisika kuitira kuzadzisa zvido zvako uye nekuona kuvimbika kwepuratifomu. Welders edu ndeyeAWS / TUV yakasimbiswa, uye maowelders edu uye mawelding maitiro anosangana EN1090 uye ISO 3834 zviyero. Isu tine kugona kwehuwandu kubva ku prototype kuburikidza nehukuru hwekugadzira kumhanya.
Kupedza Services - Isu tinopa ekupedzisa masevhisi kana zvichidikanwa, uye kuburikidza nevanovimbwa navo. Izvi zvinosanganisira kugadzira, kupenda, kupfeka, kukuya uye kukwiza. Mamwe masevhisi aripo.
Isu tinopa NDE yekuyesevhisa masevhisi.Uruzivo rwedu mukugadzira zvigadzirwa zvechigadzirwa zvehunyanzvi zvinoshandiswa kunovimbisa kuti purojekiti yako ichazadzikiswa kune zvaunotsanangurwa.
Tifonere nhasi kana tinya pano kukumbira mutengo kuchikumbiro chako.